Dharka la xidho waqtiga qalin jebinta jaamacadaha, halkee buu inooga yimmi?
Sunday November 21, 2021 - 21:45:02 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Gratuation Cap & Gown.waa magaca loo yaqaan dresska ama dharka la xidho waqtiga qalin jebinta.
Dresska ama dharka ay isticmaalaan ardeyda Somaaliyeed meel kasta oo ay ka joogaan shanta Somaliyeed, waxa la ydhaahdaa Gown, koofiyadana Roman Catholic Cap ama hat.
Waxa haboon in aynu isweydiino dhowr su’aalood, sida :
Ugu horeyn halkee dresskani ka yimmi ama laga isticmaalaa?
Somalida ama muslimiintu dhaqan ma u leedahay dharkan?
Halkee ayeynu ka soo qaadaney dhaqankan? Maxaynu u soo qaadaney ee mudan inlagu deydo?
Goorma ayuu ina soo galay? Ma dhaqan beynu u isticmaalnaa mise arrimo diineed?
Yaa isticmaala halkee u ugu horeyntii ka bilaabmey in ay ardeydu isticmaalaan?
Dress oo la yidhhado Gown iyo koofiyada oo cap ama hat la yidhaado aan eegno taariikhda u leeyahey dresskani.
Waxaad baadhaan The Catholic history of the graduate’s Cap
The history of graduation Cap
Waxaad iyana baadhaan Kelmada Clergy oo ah Priest ama wadaadka kaniisada oo isagu xidha dresskan
Waxaad baadhaan Gown iyo Catholic Cap
The Cathlolic history of graduation’s Cap and gown
Gown = waadresska isku dhan ee sawirkan ka muuqda
clergy. Waa wadaadka kaniisada ee qaabilsan wacdiga, meherada iyo hawlaha kale ee Kaniisada
Kaniisadaha oo awood badan ku lahaa mujtamaca kristanka ah ayaa la geyn jirey ardeyda marka ay dhameystaan waxbarashada si loogu duceeyo, waxaanay ahey dhaqan soo jireena ilaa immikana sii socda meelaha qaarkood, markaas ardeyda waxa la fari jirey in ay xidhaan dresska u xidho Clergyman oo ah wadaadka kaniisadu xidho.
(In the 12th and 13th centuries, students and teachers typically wore clerical clothing because the church was highly influential at this time. Medieval universities helped inspire academic dress, including the familiar graduation cap)
The graduation cap and gown keeps alive the tradition of the great medieval Catholic universities.
At that time, a scholar would have taken religious orders, and would have worn the long gown and hood that made the cold stone buildings of medieval colleges a bit more habitable
Today’s academic regalia has its roots in medieval Europe, when universities were just beginning. With the growth of cities in the 12th and 13th centuries, the demand for.
Sidaas darteed, waxaan dadweynaha, culiada iyo madaxda ay khuseyba u soo bandhigeyaa in ay marka hore raadiyaan oo ka soo baaraan degaan sababta dadkii Somaliyeed ku kelifey in ay wada xidhaan dresskan. Hadii ay qabaan dood teydan ka duwan dadka ha u soo bandhigaaan cid ay ka soo min guuriyeen dhaqankan.
Waxaan ummadda kula talin lahaa in ay dhaqankoodii soo xidhaan wiilashu, gabdhuhuna toobab asturn oo isuwada eg iyo xijaab in ay ku dabaal degaan. Daraasad intan ka badan baan sameeyey, wanaan idiin soo bandhigidoonaa hadii dood laga qabo.